चटपटे खाने? पूर्व युवराज पारस शाहकी छोरी पूर्णिकाले बनाउँदैछिन् यति मिठो चटपटे (हेर्नुहोस् भिडियो) | भिडियो
June 9, 2021 NepstokLeaveaComment on चटपटे खाने? पूर्व युवराज पारस शाहकी छोरी पूर्णिकाले बनाउँदैछिन् यति मिठो चटपटे (हेर्नुहोस् भिडियो)
नेपालमा राजसंस्था गएको दशक बढि भै सक्यो तर अहिले पनि राजसंस्थाको चर्चा हुने गर्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देशवासीका नाममा बेला बेलामा सन्देश दिइरहन्छन् । पूर्व युवराज पारस शाह अहिले धेरै समय पोखरामा छन् ।
पारसका छोरा हालै हाइस्कुल ग्राजुएट भए । उनले दिएको प्रवचन पनि चर्चित भएको थियो । हृदयेन्द्रका दिदीहरु अहिले थाइल्याण्डको बैंककमा पढाई गरिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कस्तो होला भनेर आम चासो हुनु स्वभाविककै हो ।
यसै क्रममा पूर्णिकाले एक भिडियो क्लिप इन्ष्टामा राखेकी छिन् । उक्त भिडियो फुलबुट्टे सारी भन्ने गीतमा बनाइएको टिकटक हो तर उक्त भिडियो चर्चामा आउनुको कारण उक्त भिडियोमा पूर्णिका र उनकी साथी मिलेर चटपटे बनाइरहेको हुनाले हो ।
पारसका दुबै छोरी इन्ष्टामा सक्रिय छन् र समय समयमा अनेक भिडियो राखिरहेका हुन्छन् । केही भिडियो चर्चित समेत हुने गर्छन् भने केहीले विवाद समेत ल्याउने गरेका छन् ।
एमाले एकता हुन नसक्नुको मूल जड भनेकै ओली, नेपाल र खनाल हुन् : योगेश भट्टराई
लकडाउनमा नै सुन्दरी नायिका केकी अधिकारीले आफ्ना प्रेमीसँग गरिन् विबाह !
May 15, 2021 Nepstok
May 17, 2021 May 17, 2021 Nepstok